लक्ष्मी बैंकको युरो कप योजनाः मोबाइल मनि प्रेडिक्ट एन्ड विन ! | Ratopati
लक्ष्मी बैंकको युरो कप योजनाः मोबाइल मनि प्रेडिक्ट एन्ड विन !
personरातोपाटी संवाददाता exploreकाठमाडौं access_timeअसार १, २०७८ chat_bubble_outline0
काठमाडौं । लक्ष्मी बैंकले युरो कप २०२१ योजना ‘मोबाइल मनि प्रेडिक्ट एन्ड विन !’ सार्वजनिक गरेको छ । युरो कप २०२१ संचालन भइरहेको अहिलेको अवस्थामा लक्ष्मी बैंकले खेल पारखीहरुलाई मध्यनजरमा राखेर उत्साह थप्न बैंकले एफ–वान सफ्टसँग मिली ‘गोल प्रेडिक्ट एन्ड विन’ योजना ल्याएको हो ।
यो योजना युरो कप २०२१ सुरु भएको दिनदेखि अर्थात जुन ११ देखी सुरु भएको बैंकले जनाएको छ । यो योजना युरो कपको अन्त्यसम्म अर्थात अन्तिम दिन जुलाई ११ सम्म जारी रहने बैंकले जनाएको छ । यस योजनामा ५ जना भाग्यशाली विजेताहरूले ५० एमबीपीएसको १ वर्ष अवधिको इन्टरनेट सब्स्क्रिप्सन पाउन सक्ने छन् ।
योजनामा भाग लिन लक्ष्मी बैंकका ग्राहकहरुले मोबाइल मनी सेवा सुचारु गरेको हुनुपर्दछ र मोबाइल मनिका प्रयोगकर्ताले भने सजिलै एपद्वारा नगद ट्रान्सफर गरी यसमा सहभागी हुन सक्नेछन् ।
मोबाइल मनिको ’फोन–पे’ वा अन्तर बैंक नगद ट्रान्सफरबाट नगद ट्रान्सफर गर्दा प्रोमो कोड राख्ने ठाउँमा आफुले अनुमान गरेको युरो कप विजेता देशको नाम राख्नुपर्नेछ ।
योजनाको अवधि पछि युरो कपको विजेता देशको सही अनुमान गर्ने ग्राहकहरू मध्येबाट लक्की ड्र मार्फत ५ जनालाई विजेता घोषणा गरिने बैंकले जनाएको छ ।
कुमारी बैंकद्वारा बेलकामा निर्माणाधिन अक्सिजन प्लान्टलाई ३ लाख सहयोग
मोरङको लेटाङमा नेपाल बङ्गलादेश बैंककोे विस्तारित सेवा केन्द्र संचालन
सनराइज बैंकको शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा र एटीएम सेवा बिस्तार
ज्योति विकास बैंकद्वारा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई १० लाख रुपैयाँ सहयोग